Ciidamada dalka Jabuuti oo la wareegay xafiisyada Maamulka Gobolka Hiiraan. – Xeernews24
Ciidamada dalka Jabuuti oo la wareegay xafiisyada Maamulka Gobolka Hiiraan.
12. Juni 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanayo Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegayo inay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM gaar ahaan kuwa Dowladda Jabuuti ay soo farageliyeen xiisadda ka taagan Magaalada.
Ciidamada Jabuuti ee ka tirsan AMISOM ayaa la wareegay amaanka guud ee Xafiisyada Maamulka Gobolka Hiiraan oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen Ciidamo ka amar qaata Gudoomiyahii xilka laga qaaday Yuusuf axmed Hagar Dabageed kaasoo diiday inuu xilka wareejiyo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/06/soldat.png 183 275 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-06-12 17:08:582019-06-12 17:08:58Ciidamada dalka Jabuuti oo la wareegay xafiisyada Maamulka Gobolka Hiiraan.
Abbasadoor Maxamudd Dirir Geetan oo ku guulaytay dib usoo celinta wada hadalka... Cundhufo, Cadhaytu Iyo Garbaciise?